अभिनेता Mettyu Bomer: जीवनी, आफ्नो चलचित्रहरू
अमेरिकी फिलिम र थिएटर अभिनेता Mettyu Bomer लामो टेलिभिजन श्रृंखला मा चिरपरिचित भूमिकाको दर्शकहरूलाई धन्यवाद प्रेम जित्यो छ। यसबाहेक, उहाँले पहिले नै आफ्नो खुत्रुके मा पुरस्कार "गोल्डन ग्लोब" छ। अभिनेता को प्रतिभा र करिश्मा उहाँलाई नयाँ हाइट्स जित्न मदत गर्न। र हामी तपाईंलाई आफ्नो जीवनी र फिलिम मा सबै भन्दा राम्रो काम थाह गर्न र टिभीमा पनि प्रतिष्ठित "अमेरिकी हरर कथा" सहित टेलिभिजन शो प्रस्ताव।
केही जीवनी तथ्य
भविष्यमा अभिनेता Mettyu Bomer एक पूर्व फुटबल खेलाडी, टीम खेलाडी टेक्सास को परिवार मा जन्म भएको थियो, तर आफ्नो जीवनमा खेल सधैं भएकोले र प्रतियोगिता को काम गर्न आएको थियो। उहाँले एक भाइ र बहिनी छ। उच्च स्कूल पछि, उहाँले सफलतापूर्वक स्नातक र कला डिग्री को एक स्नातक प्राप्त गर्ने Carnegie को विश्वविद्यालय, मा आफ्नो पढाई जारी राखे।
उहाँले टेलिभिजन मा सारियो केही समय उहाँले मञ्चमा काम जहाँ 2001 मा न्यूयोर्क गर्न एक कदम, आफ्नो क्यारियर सुरु, र त्यसपछि। यसको सहभागिता धारावाहिक "मेरो सबै बच्चाहरु" र साथ पहिलो श्रृंखला बीच "मार्गदर्शक लाइट।" 2005 उसलाई "नर्थ शोर" र Dzhodi फोस्टर संग "Illusions उडान" मा Shannen Doherty संग काम दिनुभयो।
तर, सबैभन्दा ठूलो सफलता टिभी श्रृंखला "सेतो कलर" मा Nila Keffri अभिनय गर्ने कलाकार पछि उहाँलाई आए।
Mettyu Bomer: प्रेम जीवन
जानिन्छ, सार्वजनिक मानिसहरू अक्सर तिनीहरूको परिवार मा हुन्छ सबै कवर गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। एक अभिनेता को व्यक्तिगत जीवन अफवाहहरु र अनुमान संग rife छ। एक साक्षात्कार, अभिनेता उहाँले जो उहाँले evasively जवाफ विभिन्न यौन झुकाव संग मान्छे को वर्ग पर्छ कि सिधै सोधे। उहाँले बिल्कुल अरूको राय चिन्तित र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पूर्ण खुसी छैन भने। विस्तृत Mettyu Bomer पत्रकार सम्झौता अन्तर्गत आफ्नो सबै अनुप्रयोगहरू सीधा श्रृंखला को दर्जा असर गर्न सक्छ भन्दै, इन्कार गरे।
तर, मार्च 2012 मा, त्यो खुल्लमखुल्ला, आ प्रतिबद्ध बाहिर जसबाट आधिकारिक उहाँले सिमोन हल (हलिउड publicist) संग सम्बन्ध छ भनी पुष्टि। जन्म जोडाहरू - सँगै तीन छोराहरू जसलाई दुई उठाएको एक अन्यसरोगेट आमा द्वारा।
एक अभिनेता रूपमा उहाँले बीस-छ भन्दा बढी परियोजनामा भाग छ। प्रासंगिक भूमिकाको धेरै। जहाँ यो भाग Mettyu Bomer हामी पाँच सर्वश्रेष्ठ चलचित्रहरू र टिभी श्रृंखला प्रस्ताव। ध्यान, र शो आनन्द!
"मरेका देखि फिर्ता"
विज्ञान-Fi अमेरिकी टिभी श्रृंखला चिकित्सा स्कूल मा भर्ना किनभने, को लागि शहर morgue मा जब हेर्न बाध्य छ जो एक कलेज स्नातक को एक धेरै असामान्य जीवन मा फक्स च्यानल। मुख्य पात्र केही अलौकिक शक्ति छ। मरेको मान्छे, उनको मद्दत माग्दै, को morgue फन्दामा, र त्यो यो सुन्नुहुन्छ, र त्यसपछि आफ्नो शक्ति मा सबै गर्न खोज्छ।
"टेक्सास Chainsaw नरसंहार: शुरुआत"
प्रसिद्ध हरर चलचित्र गर्न Prequel। मत्ती Bomer यो मुख्य भूमिकाको एक पायो छ। अभिनेता आफैले स्वीकार रूपमा उहाँले सधैं एक हरर फिल्म खेल्न चाहन्थे। पृष्ठभूमि को मताधिकार सबै भागहरु रिसाउनु बक्स कार्यालयमा दोस्रो सब। "Leatherface" उपनाम थियो जो पागल को पहिलो सिकार को कथा।
पहिलो परिमाण को हलिउड ताराहरू अमेरिकी सुविधा फिलिम 2014 मा टेलिभिजन स्क्रीन मा भयो। उहाँलाई लेखन एक लिपि लैरी क्रेमर संलग्न र उहाँले नै नाम को आफ्नै प्ले गरे। फिल्म 1980 को दशक मा आफ्नो पहिलो आधा सेट, वा बरु छ। मान्छे को एक सानो समूह एक महामारी बन्न खतरनाक जो, एड्स को समस्या सार्वजनिक ध्यान आकर्षित गर्न प्रयास गरिरहेको छ। मुख्य भूमिकाको एक Mett Bomer प्ले। यस प्रकारका चलचित्रहरू सधैं समाजमा अनुनाद कारण। "सामान्य हृदय" अत्यधिक अमेरिका को आलोचकहरु द्वारा सराहना थियो। यसबाहेक, प्रमुख कर्मचारी सबै छ अभिनेता पुरस्कार को लागि मनोनीत "एमी।" र 2014 मा, एम Bomer सर्वश्रेष्ठ एक लघु वा टिभी चलचित्र मा अभिनेत्री समर्थन को लागि एक "गोल्डन ग्लोब" पाए।
यो परियोजनामा सहभागी भएपछि मत्ती Bomer (ठूलो पर्दामा बाहिर दुर्लभ आफ्नो फिलिम) साँच्चै प्रसिद्ध र चिन्न पनि भयो। अमेरिकी टिभी श्रृंखला, दर्शक संग ठूलो सफलता आनन्द जो, 2014 मा 2009 देखि प्रसारण संयुक्त राज्य अमेरिका नेटवर्क च्यानलमा। खेल कथा - एक आपराधिक सहयोग को कथा र एक एफबीआई एजेन्ट र मित्र को एउटा चिन्तित गठन।
एक swindler र चोर Nila Keffri - एम Bomer मुख्य भूमिकाको एक खेल्छ। उहाँलाई फसाउन प्रयास अधिक तीन वर्षसम्म विशेष एजेन्ट Piter Berk पछि, उहाँले अन्ततः न्याय को हातमा हुन्छ। लगभग चार वर्ष को लागि एक वाक्य सेवा पछि, उहाँले नयाँ जीवन संग खतरनाक कि Mistress एक बैठक, लागि चल्नेछ। अपराध सुलझाने मदतको लागि विनिमय मा स्वतन्त्रता - तथापि, नील स्थिति बाहिर तरिका भेट्टाउनुहुन्छ।
"अमेरिकी हरर कथा"
"Freak देखाउनुहोस्" र "होटल": Mettyu Bomer को हरर दुई भागहरू मा सहभागिता द्वारा चिन्ह लगाइएको थियो। र आफ्नो पहिलो भूमिका मा माध्यमिक छ र त्यो एक अतिथि अभिनेता छ। र "होटल" मा, त्यो पहिलो टोली मा, Donovan प्ले प्रवेश गरेको छ। यो श्रृंखला एक एंथोलजी छ, र प्रत्येक नयाँ सिजन दर्शक एक पूर्ण बिभिन्न भयानक कथा बताउँछ, तर अभिनेता सबै एउटै हुन्।
"मरो हार्ड" Vin डीजल। शीर्षक भूमिका मा Vin डीजल संग सिनेमा
"Fate को चुम्बन": फिलिम को अभिनेता
स्टीफन राजा को फिल्म मिलाइएको। राजा को काम मा सबै भन्दा राम्रो फिल्म
फिल्म "योद्धा": को चित्रकला समीक्षा
साइड मा सबै भन्दा राम्रो छुट्टी, छेउमा होटल तपाईं आफ्नो सान्त्वना संग प्रसन्न हुनेछ
हामी कोइला सुत्केरी आमाले सक्रिय गर्न सक्नुहुन्छ? प्रयोगको लागि निर्देशन, contraindications
Beloglazov Sergey: जीवनी र फोटो
"द गोधूलि सागा: ताजा डन - भाग 2": अभिनेताहरु। "द गोधूलि सागा: ताजा डन - भाग 2" .: वर्ण
यो एक छाता वा रूखमुनि, समुद्रको छाया मा एक तन प्राप्त गर्न सम्भव छ?
Kamenka मा "सेतो पहाड": रूसी प्राण सम्पूर्ण चौडाई संग बिदा
के राम्रो Nikon वा Canon
यो गर्भमा बच्चालाई फीड? हप्ता आमाको गर्भमा बच्चा को विकास